Madaxweynaha Maamulka Ximan Iyo Xeeb Oo Gaaray Deegaanka Baxdo “Sawirro” – Radio Muqdisho
Madaxweynaha Maamulka Ximan Iyo Xeeb Oo Gaaray Deegaanka Baxdo “Sawirro”
Wafdigani uu hogaaminayay madaxwaynaha maamulka Ximan iyo Xeeb C/llaahi Cali Maxamed oo ay qayb ka ahaayeen xubno ka tirsan labada gole ee maamulkaasi ayaa maanta gaaray magaalada Baxdo oo Cadaado dhinaca bari ka xigta 90-km, halkaasi oo si wanaagsan loogu soo dhaweeyay.
Wafdiga ayaa qeybaha kale duwan ee bulshada iyo maamulka deegaanka Baxdo kala tashanaya qaabka ugu wanaagsan ee Ximan iyo Xeeb ugu guulaysan karto marti galinta shirka Mudug iyo Galgaduud.
Guddoomiyaha Baxdo Yuusuf Cali Kheyre ayaa sheegay in ka deegaan ahaan ay ku faraxsanyihiin socdaalka wafdiga madaxwaynaha maamulka ximan iyo xeeb, maamulka Baxdana uu horumar sameeyay sanadkani.
C/llaahi Cali Maxamed Madaxweynaha Maamulka Ximan iyo Xeeb ayaa isaguna ka hadlay muhiimada socdaalkooda, waxaana uu sheegay in maamulku safarkan ku doonayo inuu ku xaal ogaado deegaanada iyo degmooyinka caasimadda ka durugsan, kulana tashado.
Baarleex ayaa maalmihii la soo dhaafay socdaal ku marayay deegaanno iyo degooyin ka tirsan Ximan iyo Xeeb si shacabka looga tala galiyo hawlaha maamulku samaynayo.
Naadiga Qoraalka iyo Akhriska ee Hillin Hayaan oo Muqdisho ka bilaabay Ololaha Dhiirigalinta aqriska iyo Qoraalka “Sawirro”
Naadiga Qoraalka iyo Akhriska ee Hillin Hayaan oo Muqdisho ka bilaabay Ololaha Dhiirigalinta aqriska iyo Qoraalka "Sawirro"